Liverpool Oo Sheegtay In Hal Ama Labo Ciyaaryahan Ay La Soo Wareegi Doonaan Isbuucaan. - jornalizem
Liverpool Oo Sheegtay In Hal Ama Labo Ciyaaryahan Ay La Soo Wareegi Doonaan Isbuucaan.
Tababaraha kooxda Liverpool Brendan Rodgers ayaa sheegay in kooxdiisa ay ku dhowdahay inay soo xerogeliso ugu yaraan hal waji oo cusub, lakiin waxa uu diiday inuu magaacabo ciyaaryahankaas ay ku dhow yihiin.
Reds ayaa isku diyaarineysa fasaxa ay ku tagayaan Waqooyiga Amerika, waxaana ay rajeynayaan inay ciyaartoy cusub ku soo daraan kooxda ka hor inta aysan aadin fasaxooda ka horeeya xilli ciyaareedka cusub.
Shir jaraa’id oo uu qabtay maanta Rodgers ayuu ku sheegay in ka hor inta aysan aadin Mareykanka inay rajeynayaan inay soo gabagabeeyaan saxiixayada ciyaartoyda ay doonayaan: “Waan rajeyneynaa inaan soo gabagabeyno. Ma noqon doonaan ciyaartoy badan sida la ingula sheegay”.
“Waxaan qabaa in ciyaartoy nalala xiriiriyo inay tahay wax fiican, lakiin xaqiiqda waxa ay tahay waxaan wax ka weydiinay kooxahooda kaliya seddex ama afar ciyaaryahan”.
“Waxaan rajeyneynaa inaan soo gabagabeyno hal ama labo saxiix isbuucaan”.
Tababaraha ayaa diiday inuu magacaabo ciyaartoyda diirada u saran, isagoo sheegay inaysan aheyn sidaas sida uu shaqada u qabsado.
“Marnaba kama hadli doono ciyaartoyda diirada noo saran ama kuwa aan la soo wareegeyno, ma ahan wax aan jeclahay inaan sameeyo”.
“Waxa kaliya aan dhihi karo ayaa ah in ciyaartoy dhowr ah la inala xiriiriyay, lakiin qaar ka mid ah ayaa sida xaqiiqda ah diirada ay inoo saran tahay”.